Otu esi eme ka ikwesi ntukwasi obi nke ndi ahia na ire ahia Digital | Martech Zone
Nweghị ike ijigide ihe ị na-aghọtaghị. Mgbe a na-elekwasị anya na ịchọta ndị ahịa mgbe niile, ọ na-adị mfe iwepụ ya. Ọ dị mma, yabụ na ị chọpụtala usoro nnweta, ị meela ngwaahịa / ọrụ gị ka ọ daba na ndụ ndị ahịa. Nkwado ọnụahịa gị pụrụ iche (UVP) na-arụ ọrụ - ọ na-adọrọ ntụgharị ma na-eduzi mkpebi nzụta. You maara ihe na-eme mgbe ọ gasịrị? Ebee ka onye ọrụ ahụ dabara mgbe emechara usoro ahịa ahụ?
Malite site ingghọta Ndị Na-ege Gị Ntị
Ọ bụ ezie na ọ na-atọ ụtọ ịchọta ọwa ọhụrụ na ndị na-ege ntị na-eresị, ọ dị ọnụ ala karịa ijide otu. Agbanyeghị, njigide anaghị adabere n'otu ndị ọkwọ ụgbọala dịka nnweta - ebumnuche dị n'azụ ha dị iche, yana agbanyeghị na omume na echiche nke ndị mmadụ abụọ a na-arụkọ ọnụ bụ na a ga-agwa ha iche. Iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa na-ewulite site na njigide. Nnweta ndị ahịa bụ naanị ọnụ ụzọ gafere ya.
Isi ihe dị ebe a bụ ịghọta na ndị ahịa gị anaghị apụ mgbe ahịa ahụ gachara kama ịga n'ihu na ngwaahịa / ọrụ gị ma jikọta ahụmịhe ha na akara gị.
Yabụ kedu ihe ị maara banyere ndị ahịa gị ọfụma?
Iji mezue eserese nke omume ndị na - ege gị ntị tupu yana n’oge ire ahịa ma jikọta ihe ndị ahụ achọpụtara na usoro njigide gị, ị ga - achọ itinye ọtụtụ data. Kedu ihe bụ Igodo usoro data ichebara echiche? Nwere ike ịmalite site na ịtụle:
Chọọ Metrik Ahịa
Kedu ka ndị ọrụ si achọta gị? Kedu ajụjụ gbara ajụjụ ndị na-abụghị nke akara na-eduga na ntụgharị ma ọ bụ isi nzụọ? Gini bu ndi kachasi elu ha na ebe ha bu ndi ozo leakiest? Nwere ike kegide otu mpempe akwụkwọ a kapịrị ọnụ na njirimara ndị ọrụ akọwapụtara nke wetara gị nnukwu ahịa?
Ọ bụrụ na ị nwere nchịkọta Google Analytics enyere ma tinye na Google Search Console, ị ga-enwe ike soro ala ndị a gbara ajụjụ ruo ọnwa 16 na n'oge gara aga ma mata top onesrụ ndị. You nwere ike ime ka nyocha ahụ dịkwuo omimi site na ijikọ isiokwu ndị a gaa na peeji nke ọdịda ụfọdụ ma chọpụta ha dị ka isi mmalite kachasị mma nke njem onye ọrụ iji nweta. Enwere ike imebi nke a ọbụlagodi site na ịkọwa data a na omume igwe mmadụ, ụdị ngwaọrụ, omume, yana ọdịmma iji mata ụdị ndị na-ege ntị nwere ike ịgbanwe.
Kedu ka ahịa gị si arụ? Gịnị bụ nkezi iji uru ị na-ahụ? Gini bu onodu uru onu ahia gi? Kedu ihe ngwaahịa / ọrụ gị kachasị elu ma enwere mmekọrịta na njirimara onye ọrụ na usoro oge?
Y’oburu n’inwe nkwalite nsochi E-commerce emeputara nke oma site na Google Analytics ma obu ihe ozo software nke ozo maka ya, i gha enwe ike igbaso ihe ndia nile ma chikota uche bara uru. Ihe kachasị mkpa iburu n'uche bụ na usoro ahịa na-adịkarị iche na olu nke ngalaba a tụlere. Oge ahịa ma ọ bụ ahịa ndị na-ewu ewu nwere ike ịpụta dị ka ihe na-adịghị mma mgbe elere anya na obere oge wee mepee anya gị ma debe data ahụ n'otu oge nke oge gafere ya ma ọ bụ n'ime otu oge ahụ afọ gara aga.
Nnweta na Ozi Ntuziaka
Imaara ebe ndi ahia gi si? Kedu ihe bụ ọwa nnweta nnabata gị? Ọ bụ otu ọwa ha na-achọpụta gị ma ọ bụ ka ọ bụ naanị ọwa ndị na-akwalite ọtụtụ ahịa? Gịnị bụ ọwa ndị na-akwalite ego kachasị?
Ọ bụrụ na anyị echee na weebụsaịtị gị bụ isi ihe ntụgharị gị yana ị nwere ntọala Google Analytics, ị nwere ike ịza ajụjụ ndị ahụ e kwuru n’elu. Gaa Leta Nnweta> Akuko nchịkọta iji hụ ọwa nke na - eme ka ọtụtụ ụgbọ ala ma nwee ntakịrị mbido. Nwere ike ime ka nyocha ahụ dịkwuo omimi site na ịgbanwe ngalaba ndị na-ege ntị site na Ndị ọrụ niile na Ndị na-agbanwe. Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụ otu ihe mgbaru ọsọ, ị nwere ike ịmebiwanye ọwa arụmọrụ ka ọ bụrụ otu ihe mgbaru ọsọ.
Site na data niile dị n'elu mebiri ma tinye ya na nhazi, ị nwere ike iji anya nke uche ụdị ụdị ndị na-ege ntị nwere ike ịtụgharị, ụzọ ha na mgbe na mgbe ntụgharị na etu ha si akpa agwa tupu, n'oge na mgbe ha mechara a zụọ.
Mepụta onye ahịa gị dị ka onye na-anọchite anya ezigbo onye ahịa gị ga - enyere gị aka ịzụ ahịa ngwaahịa gị nke ọma ma ghọta ihe mere ha ji họrọ gị dịka onye na - ere ha. A kọwara nke a nke ọma mgbe ejiri anya nke uche hụ ya, yabụ ka anyị setịpụ ihe atụ. Kwuo na ị na-ere akwụkwọ nri na ebumnuche gị bụ ịbawanye ọnụ ọgụgụ ahịa na ịkwalite usoro ọhụụ maka Ekele na-abịanụ maka ndị ahịa ọhụrụ na ndị ahịa dị ugbu a. Kedu nke dị nfe karịrị gị ịzụ ahịa?
“Anyị chọrọ ịkwalite [usoro nri akwụkwọ nri a] maka inye ekele a na Instagram na Pinterest Ebumnuche anyị bụ ụmụ nwanyị, afọ 24-55 hụrụ n'anya na-esi nri ma zụta ma ọ bụ tụlee ịzụ akwụkwọ nri afọ a ”
“Ebumnuche anyị bụ ịkwado usoro usoro nri [nke a] maka Martha. Ọ bụ onye na-anọ n'ụlọ nne ya n'etiti afọ 40 nke hụrụ nri. Ọ hụrụ n'anya #foodporn peeji nke ma kekọrịta efere ya na Instagram. Ọ na-agbanwe agbanwe ma nwee ụkpụrụ ọdịnala yabụ nnukwu ezumike bụ nnukwu ihe nye ya n'ihi na ha bụ naanị oge n'afọ mgbe ọ nwere ike isi nri ezinụlọ niile na ndị enyi ha. Mata azụtala akwụkwọ nri n'aka anyị wee lelee nri Instagram na weebụsaịtị maka usoro ndị mmadụ na-eme nke ọma otu ugboro n'ọnwa. Ọ bụ n'ezie na onye na-adịghị ngwa nri na organic nri. ”
Hụ ihe dị iche? Kinddị onye nnọchi anya onye ahịa a bụ ihe ị ga - enweta site na usoro a nyere n'elu ejiri usoro.
Typedị nchịkọta ndị ahịa a siri ike ịtọlite ​​ma na-aga n'ígwé na mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na ọ bụụrụ gị ọtụtụ ihe ịma aka, ị ga-ahụrịrị chọọ enyemaka site na ụlọ ọrụ dijitalụ nke nwere ahụmịhe na nchịkọta ndị na-ege ntị dị elu, nkewa, na njikarịcha mgbasa ozi.
Otutu Usoro Mgbakwunye Azụmaahịa na KPI ha na-asọpụrụ
Ugbu a ị matara onye ahịa gị ma ghọta omume ha, ụzọ ị ga - esi rụọ ọrụ na njigide ha ga - apụta ìhè karịa. Usoro ịzụ ahịa njide nwere ike ịdị iche na-adabere na niche gị, ahịa, ndị ahịa, na ebumnuche gị, mana usoro ndabere nke ịkọwa ha ka bụ otu.
Fọdụ usoro ịzụ ahịa njigide na-adị mgbe niile ma mekwaa ka ọtụtụ oge. N'ezie, nyere echiche ha na-ebugharị site na data guzobere na nzọụkwụ gara aga.
Kpọọ ole na ole.
Ọ bụ ezie na a na-ewere ya dị ka ụzọ nnweta, SEO na-enye ọnụọgụ ohere iji melite njigide ndị ahịa ma wulite iguzosi ike n'ihe.
A na - eme nke a site na njikarịcha ọdịnaya - ma na saịtị ma na-apụ. Site na ịmata isiokwu, ọdịnaya na isi mmalite nke ndị ahịa gị na-eme ma soro gị na-emekọrịta ihe, ị na-enwe ịbịaru nso iji hazie ọdịnaya iji jide ma jide ha. Mee ka usoro ahia ahia gi banye SEO na-echekwa ahia ahia ma mekwaa uzo ihe di n'ime.
Elekwasịla anya na mkpirisi ọdụ dị mkpụmkpụ kama gbalịa ibuli mkpa maka isiokwu ndị metụtara ya. Can nwere ike nweta nke a site na ịgagharị isiokwu LSI na isiokwu syntagms nke na-eme ka ndị ọrụ nwee mmasị na ebumnuche. Ka anyị laghachi na Martha na nkwalite akwụkwọ nri. Isiokwu ndị n’edemede nwere ike ime ka Mata zụta akwụkwọ nri si n’aka gị bụ usoro isi nri na-adịghị ngwa ngwa, ebe a na-eri nri, na ite ndị eji eme ha, ụdị ihe eji edozi oge ma ọ bụ etu ha si tolite ma tinye. Mata nwere ike iduga na ịzụta akwụkwọ nri ma ọ bụrụ na ọ mata onwe ya dị ka ndabere nke ezinụlọ wee hụ tebụl nri abalị dị ka isi okwu nke nzukọ, obodo na ụkpụrụ ezinụlọ. Etinyela onye ọrụ aka ka ọ mata onwe ya dị ka akụkụ nke nnukwu akụkụ, mana gbalịa hazie ahụmịhe ha.
Technicalfọdụ ọrụaka SEO, kpọmkwem na usoro nke onsite njikarịcha dị ka ebe siri ike na ebe nrụọrụ weebụ na ihe owuwu ụlọ na nti HTML5 na ahaziri microdata akara ga nyere crawlers aka ịghọta nke ọma usoro na usoro ọmụmụ dị n’azụ ya. Nke a na - enyere aka ịchọpụta ma ịhazigharị peeji nke nsonaazụ ọchụchọ dịka mmasị ndị ọrụ chọrọ. Iji maa atụ, webụsaịtị nrụpụta ọrụ yana ịsụ asụsụ ga - enyere aka gosipụta nsonaazụ dị iche nye ndị dị iche iche:
Mgbe Mata na-achọ akwụkwọ eji esi nri site na igwe na-achọ ihe, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-enweta akwụkwọ nri esi nri ngwa ngwa dị ka nsonaazụ laghachi.
Mgbe m na-achọ akwụkwọ eji esi nri site na njin nchọta, enwere m ike ị nweta akwụkwọ nri Anarchist dị ka nsonaazụ eweghachiri.
Akụkụ ndị ọzọ metụtara teknụzụ metụtara njiri na mkpokọta weebụsaịtị dịka oge ị na-ebu peeji, nzaghachi na nnweta bụ ihe dị mkpa SEO na-ebute njide onye ọrụ ma nyere aka wulite iguzosi ike n'ihe Ọ bụrụ na enweghị ike ịnweta webụsaịtị gị ma ọ bụ sie ike ibu, ndị ọrụ nwere ike ibiaghachi ma ọ bụ tinye aka na ya.
Ndị KPI akwadoro ka ha soro:
Number nke njikọ inbound
Number nke outbound njikọ
Olu nke okporo ụzọ okporo ụzọ
Olu nke ụzọ ntinye aka
Nsonaazụ ọchụchọ engine (SERP) ọnọdụ maka otu usoro ederede
Echiche peeji kwa oge
Bi oge (oge nkezi na peeji nke)
Mgbasa mgbasa ozi bụ ọwa dị ukwuu maka iwulite mmata, ntụkwasị obi, na iguzosi ike n'ihe. Ọ na-emetụta nke ukwuu na mmekọrịta na usoro SEO / SEM. Kwadoro na ahịa influencer ọ bụ ọnụ ụzọ gị iji wuo ndị na-akwado akara iji mekwuo njigide na ndozi ndị dị elu.
Mgbe ejiri ya na kalenda ederede / mbipụta akwụkwọ maka ntọala SEO maka ebumnuche ahịa yana jikọtara ya na hashtags ama ama yana njikọta nsuso ọ na-aghọ ọwa dị ike maka iwulite ntụkwasị obi ndị ahịa.
Nwere ike ịkwado hashtags ndị a ma ama na njikọta njikọta iji chọpụta ma chọpụta ohere ọhụụ maka itinye aka na pịa isi iyi nke ndị na-akwado akara ngosi. Eleghị anya uru kasịnụ nke mgbasa ozi mmekọrịta bụ ohere iji soro ndị ahịa gị nwere na ndị ahịa dị adị n'oge. Na-eji nkata na-akụziri ndị ọrụ gị ahịa ka ha jiri mgbasa ozi mmekọrịta dịka akụkụ nke ọrụ ndị ahịa gị bụ otu ụzọ kachasị eleghara anya nke na-eme ebube maka iwulite njigide na iguzosi ike n'ihe ndị ahịa.
Number nke -eso ụzọ na Fans
njikọ aka ọnụego - ma mkpọsa ma na peeji nke akọwapụtara
Pasent nke ụzọ ntinye aka emere site na usoro mgbasa ozi mgbasa ozi
The olu nke ọdịnaya kpaliri dịka akụkụ nke nkesa ahịa
Number nke Emechara ahịa ọrụ arịrịọ site na mgbasa ozi mgbasa ozi, nkọwa na izi ozi
Ozi email ahụ agaghị anwụ ma ọ bụ isi okwu nke ọrụ weebụ yana ojiji.
A na-ejikarị ahịa Email eme ihe dị ka onye bụ isi na-ahụ maka njigide onye ọrụ na kpoo ahụ ọkụ ndu oyi. Mostzọ abụọ kachasị esi arụ ọrụ site na ahịa email iji melite njigide ndị ahịa bụ iziga akwụkwọ ozi na akụkọ kachasị ọhụrụ na mmelite ọdịnaya yana ịrata ịzụta ugboro ugboro site na ịnye ego na azụmahịa maka ndị ahịa dị ugbu a.
Nchịkọta ọdịnaya maka otu n'ime usoro ndị a nwere ike ịmekọrịta na kalenda ederede gị iji nye nsonaazụ kacha mma na usoro mmeghe na CTR. Nwere ike imebi mgbalị gị gaa na ndepụta nkewapụta email dịka nhọrọ nke onye ọrụ, usoro oge, na omume mmadụ.
ma ekwesiri iji nlezianya kpoo ahia email karịa nke ọ bụla anyị kwuru n’elu. Nnukwu nchịkwa na njikwa na-adịghị mma nwere ike ịmebanye aha na ngalaba gị kpamkpam ma mebie ntụkwasị obi wuru ugbu a. Ihe kachasị mkpa ị ga-ahụ ebe a bụ na onye ọrụ gị maara etu o siri banye na listi nzipu ozi gị, kedu ka ị ga-esi mee ya yana na enyere ya ohere ịgbanwe nhọrọ ya ma ọ bụ wepu aha na oge ọ bụla.
Mgbe ị na-ekpebi ma ị ga-eji ihe nkesa nzipu ozi nke gị ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ maka ya, biko tụlee ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbaso iwu niile edepụtara n'elu ma nwee ikike ịlele ma soro arụmọrụ ya.
Number nke ozi ịntanetị ezitere si - mkpọsa kpọmkwem na mkpokọta
Pịa site na ọnụego (CTR) nke email
Meghee ọnụego nke email mkpọsa zitere
Tinyegharịa ọnụego ịzụta site na uzo email
Nyochaa, Tụọ ma Kwalite maka Ọganihu
Dịka e kwuru na mbụ, iji mee ka ndị ahịa gị na-eguzosi ike n'ihe na ịzụ ahịa dijitalụ, ị kwesịrị ịghọta ndị ahịa gị. Enwere ọtụtụ ntọala maka nyocha ndị ahịa iji chọpụta ma mezie mbọ ị na-agba iji jide ahịa gị. Mepụta atụmatụ ịzụ ahịa ndị ahịa nwere ike ịdị iche na azụmaahịa gaa na ụdị mana usoro ebumnuche na-akpata ha na-emekọrịta.
Nnyocha miri emi na nyocha elebara anya nke ọ bụla nke njem ndị ahịa gị bụ mmalite dị mma mana ọ ga-enye gị ụda data ezighi ezi. Wayzọ ị na-esi tinye data a iji jụọ ma nye azịza nye ajụjụ ụfọdụ banyere omume ha karịa ịmecha usoro ahịa ahụ ga-ekpebi ihe ịga nke ọma gị na ịme mmekọrịta mmekọrịta ogologo oge na ndị ahịa gị.
Site na njigide na-ebili iguzosi ike n'ihe na ntụkwasị obi.
Tags: nnweta ọwaụba ọnụegopịa-site ọnụegopịa-ọnụegoahịa personasNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaahịa arịrịọdigital marketingbiri ogeemail ahịa metricsnjikọ aka ọnụegoFans-eso ụzọGoogle Analyticsnjikọ inboundigosi ihe ngosikpiahịa metricsemeghe ọnụegookporo ụzọ okporo ụzọoutbound njikọnlele ihu akwụkwọechiche peeji nke otu ogendị mmadụụzọ ntinye akamegharịa zụọ ọnụegonjide ọwanjigide metricsọnụ ahịa ire ereNsonaazụ nchọta njin ọchụchọchọọ ahịa metricsagwoigwe mgbasa ozi na-elekọta mmadụ
Atụmatụ 10 maka usoro ịgba chaa chaa na-emeri